Telecom chiteshi simba wedzerai hurongwa - China Renergy Equipment Co., Ltd
Telecom chiteshi simba zvitengeswa hurongwa
Micro afoot hurongwa
Off-afoot mhepo simba zvitengeswa
Off-afoot mhepo yokutenderera zuva uye Diesel
Telecom chiteshi simba zvitengeswa
Wind dzinotenderera zuva uye afoot chemasanganiswa
Small mhepo turbines ndivo mhinduro yakakwana kuti telecommunication zvekutepfenyura.
Telecom nenhepfenyuro dziri muAtlantic zvakawanda pasi pose kuitira munhu yakakwana yokukurukura kwezvivako. In dzakawanda kumaruwa, simba zvinodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzinowanzopiwa inopiwa Via zvakatipoteredza venga Diesel emagetsi, izvo vasiri anodhura chete kuti ishande asiwo mberi nokuwedzera Zvisaririra mafuta romugove, kushandiswa Diesel emagetsi achakurumidza kuva unsustainable.
Renergy mhepo turbines ne pasi basa uye kugadzira zvinodiwa kuti kugadzwa zviri kure uye zvakaoma basa nzvimbo zvinoyevedza.
Application: Kuti kupa yakavimbika, mari-inoshanda uye zvakatipoteredza nenzwi simba mabviro China Mobile Telecom yeredhiyo kumaruwa.
Kubva gore ra2008, Renergy muchirongwa magadzirirwe yakavimbika simba mabviro Telecom nenhepfenyuro mumaruwa nzvimbo China Mobile. Vazhinji nzvimbo itsva kana yoku- nzvimbo dzakavakwa pamusoro makomo nezvikomo, zvakanga zvakafanira kuti rwomumbure ikure uye kugadzira aigona kutakurwa nguva dzose gore apo kurerutsa nzvimbo kushanyirwa
Chinokosha kwemashoko simba romugove hurongwa ndiye Renergy Wind turbine. Rinoshandiswa senzira chikuru che kure simba enyika munzvimbo okumaruwa. Zvazvakadaro, turbine ichi vaudzewo pacharo pamusoro akawanda vari kunyanyisa utsinye chaizvo okunze anogona kuvapo ari kumavirira uye kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero China. nzvimbo Northwest ndiye vhuvhuta nzvimbo; vazhinji MW mhepo mapurazi dziri ikoko. gusts mhepo kwazvo simba kunogona kuitika chero nguva yegore, kunyanya munguva yechando, uye ichi rikanyanya nokuda yepamusoro kukwira uye zvakawanda vakafumura nzvimbo apo Telecom dzemapurisa vaifanira ivakwe. Zvakanga zvakakosha kuti chero midziyo yakaiswa munzvimbo idzi yakanga Zvinokosha zvakaisvonaka uye yakavimbika vachigere rinoda pasipasi yokuzvigadzirisa.
The Hurongwa kwave operative kubva 2009 uye simba gadziriro iri kugadzwa nzvimbo wasimbisa zvakanaka zvikuru. Renergy akagadza mazana ezvinhu akadaro China Mobile. Uye pashure paizvozvo, Renergy akatanga kupa gadziriro zvakadaro China Union, China Telecom.
Saka kure, Renergy akagovera mazana ezvinhu akadaro Telecom vatengi muRussia, Tajikistan uye Iran.
Wind turbine uye rezuva paneeli vaunze magetsi, undoraira kupinda DC48 bhatiri boka kuburikidza 48V mhepo uye zuva chemasanganiswa controller, wedzerai simba nokuda Telecom mitoro.
Diesel jenareta anogona kushandiswa sezvo negadziriro yeparutivi simba zvitengeswa. System anogona zvakadini kupa AC simba kuburikidza afoot kubvisa inverter, uye iripo kubatanidza kuti afoot kuburikidza pasi afoot inverter.
RW-5kW shanduka namo, DC200V
Tower uye zvishongedzo
8m, monopole shongwe
Solar emadziro uye chikomboredzo
Battery uye chikomboredzo
1. Multiple rezuva Panel kubatanidza
2. Multiple mhepo turbine kubatanidza
3. Diesel jenareta sezvo negadziriro yeparutivi
4. Solar MPPT shanda
5. Wind turbine MPPT shanda
6. Solar simba goho voltage kudzora
7. Wind simba goho voltage kudzora
8. Digital bhatiri simba utariri hurongwa
9. Intelligent mutoro utariri hurongwa
10. System mhosva diagnosing uye kuongorora hurongwa
11. Wireless chinja maitiro
12. Wind turbine kumhanya zvakanaka.
Telecom chiteshi, chiratidzo chiteshi, GSM nechigadziko yemapurisa zvichingodaro.
Application nyaya yokudzidza
Telecom chiteshi nyaya yokudzidza
Post nguva: Apr-19-2018